ESI EWEPU WRINKLES NA PHOTOSHOP - PHOTOSHOP - 2019
Wepu wrinkles na Photoshop
Ugbo na ihu na akụkụ ndị ọzọ nke ahụ - ihe ọjọọ a na-apụghị izere ezere nke ga-abịakwasị onye ọ bụla, ma nwoke ma nwanyị.
Enwere ike ịlụ ọgụ a n'ọtụtụ ụzọ, ma taa, anyị ga-ekwu banyere otu esi wepụ (ma ọ dịkarịa ala, iwe) site na foto na Photoshop.
Mepee foto na mmemme ahụ ma nyochaa ya.
Anyị na-ahụ na n'egedege ihu, onu na olu nwere nnukwu, dịka a ga-asị na ọ bụ wrinkles dị iche iche, ma na nso anya, e nwere mpempe ụkwụ na-aga n'ihu nke ezi wrinkles.
Nnukwu wrinkles anyị na-ewepụ ngwá ọrụ ahụ "Ịgwọ Ọcha"na obere "Ntuchi".
Yabụ, mepụta otu akpa ụzọ nkwekọrịta mbụ CTRL + J ma họrọ ngwá ọrụ mbụ.
Anyị na-arụ ọrụ na otu. Jide igodo Alt ma weputa nchacha akpụkpọ anụ na otu click, wee mee ka onye ọbụla na-aga ebe ahụ na wrinkle wee pịa oge ọzọ. Ntụ ụbụrụ ekwesịghị ịdị ukwuu karịa ntụpọ a na-edezi.
Site n'otu usoro ahụ na ngwá ọrụ anyị na-ewepụ ihe wrinkles niile n'olu, n'egedege ihu na agba.
Ugbu a, gbanwee maka mwepụ nke wrinkles ọma n'akụkụ anya. Ịhọrọ ngwá ọrụ "Ntuchi".
Anyị na-eji eriri mmiri na-ekpuchi ebe a na-eji ngwá ọrụ ahụ eme ihe ma wepụ ihe ndị a ga-ahọrọ n'elu ebe dị ọcha.
Anyị na-enweta ihe ndị na-esonụ:
Nzọụkwụ ọzọ bụ ngbanwe nke anụ ụcha na mwepụ nke ezigbo wrinkles. Biko mara na ebe ọ bụ na nwanyị ahụ bụ agadi, na-enweghị usoro ịtụgharị uche (na-agbanwe ọdịdị ma ọ bụ dochie ya), ọ gaghị ekwe omume iwepu nsị niile na anya.
Mepụta otu nkwekọrịta nke anyị na-arụ ọrụ ma gaa na menu "Filter - Blur - Blur n'elu".
Ntọala nchịkọta nwere ike ịdị iche na nha nke onyinyo ahụ, àgwà ya na ọrụ. Na nke a, lelee ihuenyo ahụ:
Wee jide igodo ahụ Alt ma pịa akara ihe nkpuchi na palette.
Wee họrọ brush na ntọala ndị a:
Anyị na-ahọrọ ọcha dị ka isi na agba na -echa ya dị ka nkpuchi, meghere ya na ebe ndị ọ dị mkpa. Elegharala ya anya, mmetụta ahụ kwesịrị ịdị na-ele anya dịka o kwere mee.
Layer palette mgbe usoro ahụ gasịrị:
Dịka ị pụrụ ịhụ, na ụfọdụ ebe enwere ntụpọ doro anya. Ị nwere ike idozi ha na ngwaọrụ ọ bụla a kọwara n'elu, mana ị ga-ebu ụzọ meepụta akara nke ihe niile dị na elu nke palette site na ịpị igodo ọnụ CTRL + SHIFT + ALT + E.
N'agbanyegh i ike any i na-anwa, mgbe any i ch or o, ihu di na foto ga-ele ya anya. Ka anyị nye ya (ihu) ụfọdụ ederede.
Cheta na anyị hapụrụ akwa mbụ ahụ? Ọ bụ oge iji ya.
Tinye ya n'ọrụ ma mepụta otu site na igodo ụzọ mkpirisi. CTRL + J. Mgbe ahụ, anyị na-adanye kabido ahụ n'elu nke palette.
Gaa na menu "Ntancha - Ndị ọzọ - Ụdị Nkọwa".
Hazie nhazi ahụ, na-eduzi nsonaazụ na ihuenyo.
Ọzọ, ịkwesịrị ịgbanwe ọnọdụ ngwakọta maka oyi akwa a "Gbanye".
Mgbe ahụ, site n'iji ya tụnyere usoro akpụkpọ anụ, anyị na-emepụta ihe nkpuchi ojii, ma, na-acha ọcha, anyị na-emepe mmetụta naanị ebe ọ dị mkpa.
O nwere ike iyi ka anyị alọghachiwo na saịtị ahụ, mana ka anyị jiri foto nke mbụ tụnyere ihe e nwetara na nkuzi ahụ.
Site n'igosi ntachi obi na izi ezi, site n'enyemaka nke usoro ndị a, ị nwere ike ịmepụta ezigbo nsonaazụ.